वकिलको प्रश्न : भारतसँग युद्ध लड्नुपर्ने भएको हो र ताजा जनादेशमा जाने ? - Kohalpur Trends
वकिलको प्रश्न : भारतसँग युद्ध लड्नुपर्ने भएको हो र ताजा जनादेशमा जाने ?
१८ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा बहस भइरहेको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले भनेझैं अहिले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने स्थिति नरहेको बताएका छन् ।
रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले ताजा जनादेशमा जान निश्चित विषय किटान गर्नुपर्ने बताए ।
‘ताजा जनादेशमा जान विषय चाहिन्छ । बेलायतमा ईयुमा रहने कि नरहने भनेर जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । त्यस्तो अवस्था नेपालको हो र ?’ उनले प्रश्न गरे ‘ त्यसो भएर किन जाने ? भारतले सीमा अतिक्रमण गर्‍यो भनेर जाने कि ? त्यसो हो र ? भारतसँग युद्ध लड्नुपर्ने भएको हो र ताजा जनादेशमा जाने ?’
अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको दलमा समस्या भयो भन्दैमा संसद विघटन गर्न नपाइने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको दलभित्र समस्या थियो । त्यहाँ उहाँको विकल्पको कुरा भयो होला । विकल्प दिने, नदिने वा खोज्ने भनेको संसदमा हो । तर उहाँ (प्रधानमन्त्री) छोराले अंश माग्दा बाबुले छोरै सिध्याउछु भने जस्तो गर्नुभयो’ उनले भने ।
Previous Previous post: फर्किएनन् क्लिनफिडले भडि्कएका टेलिभिजनका दर्शक
Next Next post: एकै घरका दिदि भाई बीच घिनलाग्दो प्रेम भै बिवाह गरेर भागेपछि, तुरुन्तै खोजि जेल हाल्दिनुस भन्दै आमा रुँदै मिडियामा